Rajab (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa bisha todobaad ee Kalandarka Hijriga. Bishani waxay ku dhamaataa 29 ama 30 maalmood. Sida caadiga ah, bisha Muxaram waxay ka tirsan tahay "Bilaha Barakaysan".
Bisha Rajab waa bisha todobaad ee maalintiriska Hijriga ah. Bishan waxaa asal ahaan laga soo xigtay ereyga Af Carabiga ah ee "Rajaba" oo macnaheedu yahay "qadarin".
Wakhtiyada bilaabmeyso bisha Rajab ee sanadaha 2010 ilaa 2020
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajab&oldid=214926"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 01:32.